बैंकहरुको धम्कीपुर्ण फोनले चरीकोटका होटल ब्यवसायी चिन्तित - सिम्रिक खबर
बैंकहरुको धम्कीपुर्ण फोनले चरीकोटका होटल ब्यवसायी चिन्तित
बिगत तिन बर्ष यता सदरमुकाम चरीकोट र कालिञ्चोक आसपास करीब पाँच अर्ब रुपैंया होटल ब्यवसायमा लगानी भएको छ । तर कोभिड १९ माहामारीका कारण बिगत ३ महिना लामो लकडाउनले कुनै पनि पर्यटक दोलखा भित्रिएका छैनन् ।
भुकम्प पछि केही तङ्ग्रीन लागेको दोलखाको ब्यापार ब्यवसाय फेरी कोमा मा पुगेको छ । बिगत तिन बर्ष यता सदरमुकाम चरीकोट र कालिञ्चोक आसपास करीब पाँच अर्ब रुपैंया होटल ब्यवसायमा लगानी भएको छ । तर कोभिड १९ माहामारीका कारण बिगत ३ महिना लामो लकडाउनले कुनै पनि पर्यटक दोलखा भित्रिएका छैनन् । सदरमुकामका नाम चलेका होटलहरु बन्द भैसकेका छन र केही बन्द हुने क्रममा छन् । हजारौ होटल मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन् । कोभिड १९ माहामारी कहिले सम्म हुने हो र पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर कहिले सम्म रहने हो यकिन गर्न नसकिने अवस्था छ ।
यस्तो माहामारीका बेलामा बैंक बाट कर्जा लिई ब्यवसाय चलाईरहेका होटल ब्यवसायीलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानि गर्न बैंक हरुको धम्कीपुर्ण फोन आउन थालेको ब्यवसायीहरु बताउछन । तपाँईलाइ असार मसान्त कोलोजिङ्ग हो भन्ने थाहा छैन् ? तिर्न नसक्नेले किन कर्जा लिनु ? तपाँईको भोलिनै पत्रिकामा नाम निस्किन्छ, भन्दै कर्जा लिएको बैक बाट फोन आएको नाम नबताउने शर्तमा एक होटल ब्यवसायीले बताए । ब्यवसायिको मान मर्यादामा ठेश पुग्ने गरी रुखो ब्यवहार बैंकहरुबाट हुन थालेको छ ।
बैक भनेको घाम लागेको बेला छाता दिने, पानि पर्न थालेपछी छाता खोस्ने संस्था हो भनेको सुनेको थिए ठ्याक्कै त्यस्तै गरेको छ । भएभरको सम्पति धितो राखेर बैंक बाट होटल ब्यवसायको लागी कर्जा लिएको थिएं, आज होटल बन्द छ, किस्ता नतिरेको ५ महिना भयो । बैंकबाट दिनमै ३/३ चोटी फोन आउंछ । बालबच्चा सहित ५ जनाको परीवार पाल्न पनि धौ धौ छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो समस्या सुनीदीने को छ र भन्दै गुनाशो गर्दै थिईन् चरीकोटमै होटल ब्यवसाय गर्ने एक महिला ।
यस्तो अवस्था रहिरहेमा, आफ्नै घरमा होटल ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायी केही महिना टिक्न सक्ने भएतापनि भाडामा कर्जा लिएर ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीहरुको उठिबास हुन धेरै समय लाग्ने छैन । छिमेकी देश भारतम कोभिड १९ माहामारीको तेश्रो ठुलो सङ्क्रमित देश भएता पनि एक तिहाई मात्र ग्राहाक राख्ने गरी सुरक्षाका कार्यबिधि बनाई होटल ब्यवशाय खोल्ने तयारी गरीरहेको समयमा हाम्रो देशमा पनि केही प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ ।
:राजकुमार सुवेदी / चरिकोट